RASMI: FA-ga England oo ganaax dul dhigay macalinka kooxda Arsenal Unai Emery – Gool FM
(Premier League) 31 Dis 2018. Xiriirka kubada cagta dalka England ee FA-ga ayaa si rasmi ah u shaaciyay in uu ganaax dul dhigay macalinka reer Spain ee kooxda Arsenal Unai Emery, kadib markii lagu cadeeyay inuu sameeyay hab dhaqan aan fiicneyn.
FA-ga dalka England ayaa ku ganaaxay macalinka reer Spain ee kooxda Arsenal Unai Emery aduun dhan £ 8,000, sababa la xiriira waxa uu sameeyay inta lagu gudi jiray kulankii Brighton ee ka horeeyy kii ugu dambeeyay ay la ciyaareen Liverpool.
FA-ga dalka England iyo guddiga Anshaxa ayaa ku eedeeyay macalinka reer Spain Unai Emery uu ula dhaqmay si anshax xumo ah mid ka mid ah jamaahiirtay kooxda Brighton.
FA-ga ayaa sheegay in ay ansixiyeen ganaaxan ay dul dhigeen Unai Emery, kadib markii uu ku hor qirtay qaladkii uu sameeyay guddiga Anshaxa ee FA-ga.
Kooxda Chelse oo qorshaheeda suuqa ku darsatay xidig muhiim ka ah Bayern Munich